Kolontsaina an-tsehatra : Misokatra ho an’ny rehetra ny sekoly fampianarana teatra
Kolontsaina mandala fotoan-tsarotra. Misedra olana amin’izao fotoana ny tontolon’ny tantara an-tsehatra eto Madagasikara, na izany aza, tsy miraviravy tanana amin’ny fampivoarana io kolontsaina an-tsehatra io ireo mpikirakira. Misokatra ho an’ny rehetra ny sekoly fampianarana teatra …Tohiny
Nikaondoha nanomboka omaly teny amin’ny lapam-panjakana Mahazoarivo ny minisitera tompon’andraikitra amin’ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto amintsika, ahafahana mijery sy manapaka ny fomba entina hanamafisana ny paikady hiadiana amin’izany. Minisitera miisa dimy izay ahitana ny minisiteran’ny …Tohiny
Ambodivona : Mpiasana haino aman-jery voatsatok’antsy
Lehilahy mpiasa amina haino aman-jery iray eto an-drenivohitra, handeha hamonjy ny toeram-piasany no niharan’ny asa fanendahana tetsy Ambodivona, manoloana ny vavahady miditra ao amin’ny Tana Water Front , omaly tokony ho tamin’ny 05 ora maraina. …Tohiny
Fihaonana an-tampon’ny “notaire” aty Afrika : Tanterahina etsy amin’ny Carlton mandritra ny 5 andro
Voafidy hampiantrano ny fihaonamben’ny “notaire” aty Afrika andiany faha-13 Madagasikara. Araka izany, nosokafana tamin’ny fomba ôfisialy omaly, tetsy amin’ny Hotel Carlton izany ary haharitra dimy andro. Saika tazana nanotrona izany fanokafana izany ireo tompon’andraiki-panjakana ambony …Tohiny